Car Tech Hevitra fototra
Inona ny OBD2 Bluetooth Adapter?
Mandeha Wireless miaraka amin'ny Bluetooth OBD-II
Raha toa ka toa mampiasa ny Bluetooth rehetra ireo andro rehetra ireo, angamba izany satria ny zava-drehetra dia mampiasa Bluetooth androany-ary misy ny scanner OBD-II . Bluetooth dia mety ho nihevitra azy ho mpifaninana ho an'ny Wi-Fi, fa ny teknolojia dia tena nanindry ny fandrosoana tato anatin'ny taona vitsivitsy ho toy ny tamba-jotra tsy misy tambajotra an-tserasera, ary ny fametahana ny fitaovan'ny solosaina ao anaty ordinateranao amin'ny fitaovana scan dia tsy mifanaraka amin'izany. .
Andeha hojerentsika ny safidinao.
Wireless OBD-II Bluetooth fifandraisana
Ny mpamaky mpamaky ny ordinatera OBD-II ary ny fitaovana fitadidiana dia mampiasa connexes mifamatotra mafy, fa ny bluetooth dia miseho ho toy ny safidy hafa izay manapaka ny tadim-piderana. Na dia tsy misy fitaovana maody mahazatra ampiasaina izay mampiasa fifandraisana an-tariby fa tsy kabla ara-batana sy plug, dia misy vahaolana samihafa any.
DIY OBD-II Bluetooth Adapters
Ny ankamaroan'ny fitaovana Bluetooth OBD-II ampiasaina dia mampiasa ny microcontroller ELM327 , izay manome ny aterineto amin'ny solosainan'ny fiaranao. Satria ireo radio adihevitra ireo dia ahitana radios Bluetooth, dia azo ampiasaina izy ireo miaraka amin'ny fitaovana Bluetooth azo ampiasaina. Ny solosaina, takelaka, smartphones ary fitaovana hafa dia afaka misafidy toy ny fitaovana scan rehefa miaraka amin'ny ELM327 Bluetooth adapter.
Ny singa fototra dia ny fitaovana iOS, izay tsy afaka ny hiaraka amin'ny iray amin'ireo alalana OBD-2 Bluetooth adapter. Raha manana fitaovana iOS ianao, ary te hiketriketrika amin'ny ordinatera ao anaty fiara ianao, dia tsara kokoa amin'ny adiresy Wi-Fi OBD-II ianao raha mitady ny adapter ELM327 iPhone .
Complete scanners Bluetooth OBD-II
Misy orinasa maromaro no manolotra entana izay ahitana adapter OBD-II Bluetooth na dongle, fitaovana toy ny PDA, tablette, na laptop, ary rindrambaiko mialoha ny fametrahana scan. Ireo fonosana ireo dia tsara ho an'ny olona rehetra izay tsy manana fitaovana mifanaraka aminy na tsy te-hikorontana amin'ny mety ho tsy mifanaraka amin'ny rindrambaiko na mividy rindrambaiko samihafa.
OBD-II Bluetooth Software sy Drivers
Ny fifandraisana amin'ny fifandraisana amin'ny Bluetooth adapter OBD-II dia miova arakaraky ny fitaovana entinao sy ny rindrambaiko namboarinao. Misy rindrambaiko scanner ELM327 maimaim-poana azo ampiasaina ho an'ny sehatra toy ny Windows sy Android, fa ny rindrambaiko premium dia manolotra karazana fanampiny sy fanampiny.
Ireo fitaovana ampiasaina amin'ny Bluetooth amin'ny ankapobeny dia tsy mila mpamily fanampiny mba hanandrana ho an'ny adapter Bluetooth OBD-II. Ny dingan'ny fampifangaroana ity karazana adapter ity dia mitovy amin'ny fampifangaroana headset na fitaovana hafa Bluetooth, noho izany dia tsotra tsotra.
Counterfeit OBD-II ELM327 Bluetooth fitaovana
Ny mpampiasa OBD-II Bluetooth mora ampiasaina ampiasaina dia mampiasa microcontrollers tsy ofisialy ELM327 izay mifototra amin'ny karazan-tsipika nofantsihana fa tsy ny fitaovana elektronika ELM32. Ireo mpampiasa microcontroller indraindray dia tsy mahavita miasa araka ny tokony ho izy noho ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso kalitao, ary tsy manana ny fampitahana sy ny fanatsarana hita amin'ny microcontrollers ofisialy ELM327 izay novokarina teo ambanin'ny fahazoan-dàlana ary araka ny fepetra vaovao. Noho izany alohan'ny hividianana adihevitra amin'ny Bluetooth OBD-II, dia mandoa vola amin'ny fanaraha-maso raha toa ka manana chip piraty izy na tsia.
Best Bluetooth Car Kit Features sy Pricing
Ny olan'ny ampaham-batana (sy ny fomba hamahana azy ireo!)
Karazana fakantsary lahatsary
Tena Miasa ve ny mpanadio na ny mpanamory fiaramanidina?
Ny fomba fiasan'ny Fivarotana Tech dia mamonjy aina
Safidio ny Kitapo fandefasana tsara indrindra
Miasa tampoka ny mpitaingina fiara
Ny siansa teknolojia batterie teknolojia
Ny 7 Best USB Batteries mba hividy amin'ny 2018
Web Radio FAQ: Ahoana no fiasan'ny teknolojia?
Inona no tokony ho fantatrao momba ny Content of Reddit amin'ny NSFW
Andramo ity tsindry fohy ity mba hampitomboana ny fomba fijery ny sambo System
Ahoana no hanafoanana ny fampisehoana mozika Apple
Slate Tablet Computer Comparison
Moa Ve Ireo Tena Free Microsoft Product Keys?
Mampiasa USB Wireless Adapters miaraka amin'ny Xbox 360
Ianaro ny rpc.statd Linux Command
Ho afaka hampiasa mpampiasa vaovao ve ny mpampiasa ahy?
8 Fitaovam-pifandraisana an-tsokosoko sy finday
Hafatry ny fakan-tsary Samsung
Ahoana no ahafantarana raha mampiasa 32-bit na 64-bit Outlook ianao
Inona no atao hoe fitahirizana rahona?
IVault App noho ny iPhone / iPod Touch
Grand Theft Auto San Andreas Cheats sy Codes
Ny 6 Best Cameras mba hividy amin'ny 2018 ho an'ny Under $ 250
Ahoana ny fomba ampiasana ny ra mena amin'ny programa famoronana
Fanatsarana ny fikarohana amin'ny dingana folo
Ahoana ny fomba famerana ny mari-pamantarana ny Wi-Fi